Ra?isal wasaare saacid oo canbaareeyey weerarkii Argagixiso ee lagu qaaday suuqa Nairobi – Radio Daljir
Ra?isal wasaare saacid oo canbaareeyey weerarkii Argagixiso ee lagu qaaday suuqa Nairobi
Seteembar 22, 2013 3:15 b 0
Muqdisho, September 22, 2013 – Ra?isal wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon ayaa si kulul u canbaareeyey weerarkii shalay lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo suuqa joogtay.
Ra?isal wasaare Saacid oo maanta saxaafada kula hadlay Muqdisho ka hor inta uusan u bixin Swezerland ayaa yiri ?Aad baan canbaarayn ugu jeedinaynaa weeraradii ka dhacay Westgate iyo khasaaaraha soo gaaray shacabka aan walaalaha nahay ee Kenya iyo dowladda intaba.?
Waxaa uu sheegay ra?isal wasaaraha Soomaaliya mudane Saacid shirdoon in ay tacsi u dirayaan dhamaan qowsaskii iyo ehelladii ay ka geeryoodeen dadka lagu laayey weerarkii Argagixiso ee shalay ka dhacay Kenya sida uu hadalka u yiri, isagoo intaas ku daray in shacabka Soomaaliyeed garab taagan yihiin kuwa Kenya ee deriska la ah.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay weerarkii shalay ka dhacay suuqa Westgate, Afhayeenka kooxda sheikh Cali dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid qorshaysan oo loogu aar gudayey dhibaatooyinka ay ciidanka Kenya ka geysteen Soomaaliya.
Kenya waxaa koonfurta Soomaaliya ka jooga ilaa 4000 oo Askari oo ka tirsan howlgalka AMISOM ee jooga dalka, sidoo kale ururka Al-shabaab ayaa dhowrjeer sheegay in ay weeraro waa weyn ka gaysan doonaan Kenya iyo dalalka kale ee deriska ah.
Gollaha amaanka ee Qaramada Midoobey, Maraykanka iyo dalal kale oo ka tirsan caalamka ayaa si kulul u canbaareeyey weerarka lagu qaaday suuqa Westgate, kaas oo khasaare fara badan uu ka soo gaaray shacabkii ku jiray suuqaasi, xili ay kooxo lagu sheegay Argagixiso afduubteen dhamaan dadkii joogay suuqa.
Baahin: Sabti, 21 SEP 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo